राईजिङ नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट प्रालीको शुभारम्भ-Nagarikaawaj.com
राईजिङ नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट प्रालीको शुभारम्भ
नागरिक आवाज/काठमाण्डौं २६ पुष । राईजिङ नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट प्रालीको सुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष डा. गोवीन्द पोखरेलको प्रमुख अतिथ्यतामा शनिवार अनामनगर काठमाण्डौंमा सुभारम्भ कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी डा. पोखरेलले दिप प्रज्वलन गर्दै स्वरोजगारमा लगानी वढाउँदै देश विकासमा सहयोग पुराउने उदेश्यमा सफलताका लागी सुभकामना दिनुभएको थियो ।
प्रालीका अध्यक्ष केशव पाठकको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा त्रिवी व्यवस्थापन संकायका डिन विष्णुहरी कोईरालाले उक्त प्रालीले जसरी लगानी वृद्धी गर्दै आएको छ त्यसरीनै देशको विकासमा सहयोग रहोस भनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
त्यसैगरिनै कार्यक्रममा कृर्षी वैज्ञानिक डा. हरिकुमार श्रेष्ठ, ऐक्यवद्धता मासिकका अध्यक्ष तथा अष्टज अभियानका उपाध्यक्ष निलकण्ठ तिवारी, चलचित्र निर्माता तथा निर्देशक आकाश अधिकारी, त्रिवीका सह प्राध्यापक डा. गणेश पाठकले उक्त प्रालीले प्रगति गर्दै अगाडी वढ्न सुझाव तथा सुभकामना दिनुभयो । प्रालीका तर्फवाट उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्नुभएको थियो।
यसैगरि प्रालीका तर्फवाट स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद शर्मा र कोषाध्यक्ष श्रीधर पाठकले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको संचालन रमेश खतिवडाले गर्नुभएको थियो । २०७१ साल चैत महिनामा स्थापित यस प्रालीले स्थापना कालदेखीनै उदेश्य अनुरुप आर्थिक संकलन गर्दै विभीन्न स्वरोजगारमुलक कार्यक्रममा लगानी वृद्धी गर्दै युवा वर्गमा आकर्षित हुदै आएको छ ।
वेरोजगारी युवालाई स्वरोजगार मार्फत देशमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दै वेराजगारी दर घटनाउन का साथै देशको आर्थिक वृद्धीमा टेवा पुराउने मुख्य उदेश्य रहेको समेत वताईएको छ । ४० वर्ष मुनीका युवाले १५ करोड लगानीमा सुरुवात गरि १० वर्षभित्रमा ठुला आयोजनामा अग्रणी भुमिका निर्वाह गरिने उद्घोष समेत सोही कार्यक्रमवाट गरिएको थियो ।